Top 11 Canva Alternatives Tsara Indrindra ao 2021
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Top 11 Canva Alternatives Tsara Indrindra ao 2021
By Eva Williams, Mathis Ravatomanga 2021-09-08, Malagasy Blog
Ity fanangonana alternatives Canva ity dia noforonina manokana ho an'ireo izay mitady rindrambaiko an-tserasera, finday na maimaim-poana handrafetana, hizarana ary hanontana karatra, logo, fampisehoana ary modely hafa.
Top 11 Safidy Canva Tsara Indrindra
Raha tsy tianao ny interface an'ny Canva na mila endri-javatra bebe kokoa dia apetraho ary ampiasao ny iray amin'ireto programa ireto amin'ny famoronana endrika sary tsy misy fahaiza-manao manokana. Ny ankamaroan'izy ireo dia maimaim-poana tanteraka sy mpampiasa.
Top 3 Safidy Canva
Ny safidy tsara indrindra izay mitsitsy fotoana: RelayThat
Ny fitaovana an-tserasera tsara indrindra amin'ny famolavolana sary: PicMonkey
Sehatra fiaraha-miasa lehibe: Visme
Canva dia serivisy an-tserasera mamela ny mpampiasa hanao famolavolana tranonkala na dia tsy mahay manao sary aza. Na izany aza, raha tsy tianao ny Canva noho ny vidiny na raha te hanandrana programa hafa ianao dia eto no ahitanao mpisolo toerana Canva 10 mahomby ho an'ny mpampiasa rehetra.
Nodinihina ihany koa:
Safidy tsara indrindra ho an'ny infografika: Easelly
Tonga lafatra ho an'ny ekipa media sosialy kely: Pablo
Ho an'ny mpamorona-amateurs: Gravit
Malaza eo amin'ireo mpitantana media sosialy: Crello
Ny tena mitovy amin'ny Canva: Desygner
Mety ho an'ny vao manomboka: Adobe Spark
Ho an'ny asa haingana amin'ny telefaona: WordSwag
RelayThat dia fitaovana famolavolana haingana azonao ampiasaina hamoronana sary ho an'ny tambajotra sosialy sy dokam-barotra. Ny tombony lehibe dia ny fitsitsiana ny fotoananao.
Ny famoronana sary matihanina dia haingana dia haingana
Manohana ny tambajotra sosialy rehetra
Safidy fanondranana isan-karazany
Fitaovana be dia be ho an'ny asa
Tsy mora foana ny manamboatra elanelam-potoana
Tsy misy ny mety hamoronana anao manokana
Endri-javatra lehibe RelayThat:
Manolotra endritsoratra manokana
Modely sary doka
Ny loko miloko dia azo ovaina haingana
Mitahiry sy manangona endri-javatra
RelayThat dia fitaovana tsotra ampiasaina izay manome modely ho an'ny tambajotra sosialy lehibe rehetra (ao anatin'izany ny AdSense), mihoatra ny 2000 Smart Layouts ary sary maimaimpoana 350.000. Safidy Canva tsara io, izay manolotra fitaovana fanovana sary sarotra sy ny fahafaha-manomana ny lahatsoratra Instagram ho avy.
Amin'ny RelayThat, ianao dia ho afaka mamorona sary avo lenta ho an'ny tamba-jotra maro tsy misy ezaka. Azonao atao ny mamorona sary 20 mihoatra ny haben'ny sary amin'ny fampidirana singa maromaro fotsiny ary amin'ny fampiasana loko misy loko.
Azonao atao ny mampiasa azy maimaim-poana amin'ny famoronana kaonty. Na izany aza, tokony hoheverinao fa ny sarinao dia hanana mari-pamantarana RelayThat.
PicMonkey dia ilay orinasa namolavola ny tonian-dahatsary Picnik novidin'i Google tamin'ny 2010. Androany, PicMonkey dia manome ny mpampiasa SaaS vahaolana, izay midika fa tsy mila mametraka na inona na inona ianao.
Manolotra fitehirizana rahona
Ny mety hiasa amin'ny lahatsoratra
Tsy fahampian'ny safidy fanovana sary batch
Endri-javatra lehibe PicMonkey:
Ny mety hamoronana endrika sary maoderina
Azonao atao ny mamorona ny marikao ary mampivelatra ny orinasanao
Manolotra izay ilaina rehetra amin'ny sarin'ny tambajotra sosialy
Manome endrika, gradien ary sivana
Ny mety hanovana tsirairay ny sosona tsirairay
Manolotra ny vokatry ny soratra, toy ny curve sy ny drafitra
Ankoatr'izay, ity safidy Canva ity dia azo ampiasaina ho fampiharana ao amin'ny Facebook sy Google Chrome. Ny serivisy dia miasa arak'ilay maodelim-freemium, izay midika fa misy fampiasa fototra sasany maimaim-poana. Fa ho an'ny fitaovana mandroso sasany, tsy maintsy mandoa vola ianao (manomboka amin'ny $ 33 isan-taona).
Amin'ny maody maimaim-poana, PicMonkey dia mamela anao hametaka sary ho an'ny tifitrao, mampihatra ny vokany sy ny sivana ho azy ireo, ary mamorona fanazavana miaraka amina endritsoratra maro samihafa. Azonao atao ny mampakatra sary avy amin'ny solosaina, Dropbox, Facebook, ary Flickr. Azonao atao ihany koa ny mijery PicMonkey alternatives raha tsy gaga amin'ity programa ity ianao.
Visme dia sehatra miorina amin'ny rahona hamoronana votoaty hita maso, ahafahanao mamolavola haingana ireo fampisehoana, infografika ary sora-baventy. Manolotra modely, sary, sary masina efa an'arivony efa natao, sarintany, sarintany mihoatra ny 50 ary koa clip audio sy video.
Ho an'ny fiaraha-miasa
Modely efa voaomana an'arivony
Mitahiry rakitra havoaka amin'ny endrika samihafa
Fitaovana fanovana tsotra ampiasaina
Fitaovana voafetra ao amin'ny kinova maimaim-poana
Endri-javatra lehibe Visme:
Safidy hamoronana atiny misy marika
Tabilao, widget sy data ary sarintany mihoatra ny 50
Animated zavatra sy atiny fifandraisana
Rohy sy teny miafina voahidy ho fizarana azo antoka
Ahafahanao misafidy ny toerana marina sy ny zoro ny sary
Manampy horonan-tsary sy feo
Rindrambaiko fampisehoana Visme noforonina manokana ho an'ny fiaraha-miasa. Ny tetikasa dia azo havoaka ary zaraina amin'ny alàlan'ny URL. Ankoatr'izay, ny mpandray dia afaka mijery azy ireo amin'ny birao na fitaovana finday, ary afaka mahazo mari-pahaizana momba ny analytics sy mpitsidika amin'ny tetikasanao ianao.
Izy io dia mirakitra modely an'arivony amin'ny famoronana tatitra, tabilao, torolàlana sns. Azonao atao koa ny misafidy modely mifandraika amin'ny anatomie, orinasa, varotra ary marketing, tsy mitady tombony, fahasalamana sy fanafody, fanabeazana, toerana, resume, siansa sy teknolojia.
Aorian'ny fisafidianana modely iray dia azonao atao ny manova ny lahatsoratra, sary, loko ary ny firafitra. Hahita singa efa voaomana ho an'ny lohateny sy lahatsoratra, statistika, sary, kisary ary tabilao ianao. Ary koa, misy endri-tsoratra mihetsika izay azonao ampidirina amin'ny tetikasanao amin'ny tsindry iray. Rehefa nahavita tetik'asa iray ianao dia afaka mamoaka azy amin'ny Internet, manao azy manokana, mametraka azy ao anaty tranonkala iray na misintona azy raha hampiasaina ivelan'ny Internet.
Stencil dia anarana vaovao an'ny Share as Image. Iray amin'ireo rindrambaiko famolavolana sary maimaim-poana maimaim-poana ary safidy tsara ho an'i Canva. Ity dia fitaovana famolavolana sary an-tserasera an-tserasera malaza rahona, izay ampiasain'ny mpivarotra sy bilaogera maro.
Azonao atao ny manampy ny mari-drano anao
Manana extension ho an'ny Chrome
Endri-javatra lehibe Stencil:
Manome sary sy sary tahiry maimaimpoana
Ny mety hizarana sary amin'ny Instagram
Maherin'ny 1.500.000 sary afara
Ny fahafaha mampakatra sy hitahiry logo maro
Mihoatra ny 100.000 nalaina
Stencil dia fitaovana fanaovana sary miorina amin'ny rahona izay mamela ny mpampiasa azy hamorona sy hizara votoaty hita maso haingana be. Mamela ny orinasa madinidinika, ny mpivarotra media sosialy ary ny bilaogera handroso mialoha ny sary mba hamoronana lahatsoratra media sosialy mahatalanjona, sary marketing amin'ny atiny, doka sary, sary mailaka, sns.
Ny stencil dia tsotra hifehezana sy hampiasana azy. Iray amin'ireo safidy tsara indrindra any Canva izy satria manolotra endrika be dia be ary ahafahan'ny matihanina sy ny vao manomboka mamorona sary ho an'ny tranonkala, bilaogy ary tambajotra sosialy.
Anisan'ireo mampiavaka azy indrindra, hahita sary miorina ianao, maodely lehibe, ny fahafaha mampakatra sy hitahiry sary famantarana, fitanisana, endritsoratra tsy tapaka ary tranokala Google, fanitsiana mora, sary masina ary sary, ary fanitarana ho an'i Chrome.
Easelly dia mpamoaka lahatsoratra amin'ny Internet amin'ny famoronana sy fizarana infografika. Io dia ahafahanao maka sary an-tsaina ny fampahalalana ho an'ny tatitra, fampisehoana, lahatsoratra ary lahatsoratra. Ny serivisy dia miorina amin'ny tranokala ary azo alaina avy amin'ny fitaovana rehetra mifandray amin'ny Internet.
Serivisy fanampiana mavitrika
Ny modely dia mety amin'ny lohahevitra rehetra
Lohahevitra voafaritra sy sary ao amin'ny kinova maimaim-poana
Fikirana tsy ampy
Endri-javatra lehibe Easelly:
Tsy misy tahiry fanovana eo ho eo fanovana
Lahatsoratra sy tranonkala web ho an'ny aingam-panahy
Sary 60 sy sary 25 maimaim-poana
Ity safidy Canva ity dia natao hanehoana karazana data samihafa. Izy io dia afaka ampiasain'ny manampahaizana manokana amin'ny sehatra samihafa amin'ny famoronana tatitra, mpampiofana, mpanolo-tsaina, mpitantana dokambarotra sy varotra amin'ny fampisehoana vokatra sy serivisy, ary koa mpianatra sy mpianatra amin'ny fampidirana sary miloko mahaliana amin'ny tatitra, taratasy momba ny teny ary dissertations.
Azonao atao ny manitsy ny iray amin'ireo modely misy na mamorona ny tetikasanao manokana avy hatrany amin'ny fisafidianana ireo lohahevitra omena ao amin'ny kiheba Themes. Ho afaka misafidy loko sy haben'ny zavatra, marika ary ny toerana misy ireo singa hita maso eo amin'ilay solosaina ianao. Ny tetikasa vita dia azo sintonina ao amin'ny JPEG endrika na apetraka amin'ny bilaogy na tranokala amin'ny alàlan'ny kaody HTML.
Pablo dia tranokala tsara ho an'ny mpivarotra izay matetika miasa miaraka amin'ny atin'ny sary media sosialy ary te hanatsara ny tetikasan'izy ireo. Izy io dia manana interface interface intuitive, fa aza mieritreritra fa fototra ity fitaovana ity.
Mety ho an'ny haino aman-jery sosialy haingana
Tsy mila miditra ianao vao afaka mampiasa azy
Tsy afaka mamonjy ireo tetikasanao ianao ary miverina mitsidika rehefa avy eo
Endri-javatra lehibe Pablo:
Sary maherin'ny 600
Ny mety hampiakarana sary
Afaka mizara sy misintona sary ianao
Ny mety hanovana ny haben'ny sary
Raha mitady fitaovana mora ampiasaina amin'ny famoronana sy fanovana sary ianao dia i Pablo no ilainao. Ity dia iray amin'ireo alternativa Canva tsara indrindra misy tranokala azo takarina, izay ahafahanao mampiasa sary atolotra, ary koa mampakatra ny anao manokana.
Azonao atao koa ny manova ny haben'ny sarinao, manampy sivana mahaliana ho azy ireo ary mifantina endritsoratra mahafinaritra.
Raha vantany vao namorona sary famantarana na sary irina ianao dia ho afaka hizara izany amin'ny namanao sy mpiara-miasa aminao amin'ny Instagram, Facebook, na Twitter.
Ny mahatsara an'ity fitaovana ity dia ny sary noforoninao dia anao tanteraka ary azo zaraina na alefa isaky ny irinao. Tsy hisy hanana fidirana amin'ny tetikasanao.
Tsy maninona na mpamorona sary matihanina ianao na vao manomboka, mety amin'ny rehetra ny Gravit! Ity serivisy fanovana sary ity dia manolotra fiasa vaovao be dia be ary manana sehatra roa feno ho an'ny fampiasan'ny tena manokana sy manokana.
Tranombokim-bokin'ny fananana vector
Ny browser sy ny kinova cross-platform dia miray amin'ny rahona
Endri-javatra lehibe Gravit:
Gravit Designer dia rindrambaiko famolavolana volo-tranonkala miorina amin'ny tranokala maimaim-poana, izay tsy ny Canva hafa ihany fa an Adobe Illustrator hafa. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia ny fitaovana fanovana SVG. Manampy ny mpamorona tsy za-draharaha izany hahazoana vokatra tsara nefa tsy misy fahasarotana rehefa mampiasa azy io. Ity sehatra ity koa dia manana endrika tsara sy tsotra.
Gravit Designer dia manome maodely vonona-hampiasa be dia be sy ny fahafaha-manamboatra ny zava-drehetra arakaraka ny fanirianao. Ary rehefa vita ny tetikasanao dia azonao atao ny misintona azy ho mangarahara tanteraka PNG, JPG, SVG, or PDF file.
Crello dia rindrambaiko mora ampiasaina, mampiasa izay hahafahanao mamorona sora-baventy tsotra amin'ny fotoana fohy. Izy io dia manana interface mahasoa sy takatra.
Fanangonana sary sy lahatsoratra lehibe
Modely Pro be dia be (raha havaozina)
Fitaovana fototra voafetra ao amin'ny kaonty PRO
Endri-javatra lehibe Crello:
Modely maimaim-poana sy be karama
Ny fahafaha mampakatra ny haino aman-jery sy ny rakitrao
Animations ho an'ny GIF sy ny MP4 manondrana amin'ny safidy
Fanangonana karazan-tsoratra samihafa amin'ny fampidirana sora-baventy
Depositphotos nahavita asa tsara ary namorona tonian-dahatsary maso mahafinaritra izay manome sary maherin'ny 60 tapitrisa, modely 11 000, endrika endrika 33, ary sary sy vektor 12 000 maimaim-poana. Crello dia rindrambaiko famoronana loharano misokatra and another good hafa to Canva.
Tsindrio fotsiny ny sary dia tadiavo ny Blur sy ny vokatra hafa ao amin'ny varavarankely pop-up Effects. Tsotra be ny fampiharana ilay blur. Ny sisa ataonao dia ny misintona ilay slider mandra-paha-tsy manjavozavo ny sary.
Azonao atao ny manambatra ny blur amin'ireo sary hafa azonao jerena ao amin'ny fikandrana mipoitra. Ireo vokatra ireo dia misy ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny saturation, ny X-Process, ny Vignette ary ny Tint.
Desygner dia manana interface toa an'i Canva. Izy io dia manana sary sy modely maimaimpoana maro izay azonao ampiasaina hamoronana fanasana, sora-baventy, karatra, hafatra Facebook, bitsika, ary koa logo fandraharahana. Satria tsy misy ferana isam-bolana, dia hanana olana ianao raha tsy miady amin'ny famoronana.
Ny fahafaha-mampiasa ny programa maimaimpoana
Mora ny mamorona atiny sary
Fomba maro samihafa
Indraindray ny interface dia lozabe
Endri-javatra lehibe Desygner:
Modely efa vonona hampiasaina maro
Zavakanto, sticker ary sary afara maimaimpoana maimaimpoana
Azonao atao ny manatratra atiny miavaka marketing
Desygner dia manome fomba mora hisarihana sy handatsahana sary. Azonao atao ny manova sary, endritsoratra, lahatsoratra ary loko tsy misy ezaka. Manolotra drafitra vidiny tsotra izy io. Ny drafitra maimaimpoana mandrakizay dia misy famerana, ary ny drafitra Premium dia mitentina $ 9,99 isam-bolana ary manome fidirana feno amin'ireo endriny rehetra.
Raha tsy tianao ny mampiasa serivisy miorina amin'ny tranokala hamoronana sary dia ho tianao ny zava-misy fa tsy toy ny ankamaroan'ny fampiharana mitovy amin'izany, i Desygner koa dia manohana PSD ary endrika PPT. Ho fanampin'izay, ho afaka hamonjy ny valiny amin'ny endrika JPG na PNG ianao.
Na dia tsy mahery vaika toy ny fitaovana hafa mandroso kokoa natolotry ny orinasa aza ny Spark, dia mora be ny mampiasa azy io satria ny saina mandeha ho azy no omena bebe kokoa fa tsy ny fifehezana ny famoronana.
Modely tsy dia be loatra
Mety ho sarotra ny manamboatra ny endriny
Endri-javatra lehibe Adobe Spark:
Manolotra famaranana famoronana ho an'ny horonan-tsary
Mora voafehy, afaka 5 minitra ianao hianaranao ny fampiasana azy
Afaka miasa miaraka amin'ny horonan-tsary, sary ary pejy ianao
Sary sy mozika maimaimpoana
Adobe Spark manolotra fitaovana hanampiana ireo mpampiasa hamorona lahatsoratra, pejy ary horonan-tsary. Ny Adobe Spark Post dia maneho tsara ny fampiasa omen'ny Canva. Ny Spark Post dia mamela ny mpampiasa hamorona modely mora foana, mampihatra lohahevitra amin'ny volavolainy, mamerina manova ny haben'ny lahatsoratra, manampy ny sary mihetsika ary ny marika ho an'ny tetikasan'izy ireo.
Tombony iray hafa koa ny Adobe Spark free manome anao fidirana amin'ny endri-javatra fanampiny, toy ny fampidiranao ny endrika amam-panaonao manokana amin'ny sary an-tsary, famoronana modely misy marika, ary koa fanohanan'ny telefaona sy chat.
Ho an'ireo mpampiasa efa manana kaonty Adobe Creative Cloud, ny endri-javatra Spark rehetra dia efa tafiditra ao amin'ny fisoratana anarana. Tadidio koa fa azonao atao foana ny mampiasa ny anay Adobe Creative Cloud discounts.
WordSwag dia typografika mahafinaritra ary mpamorona mitanisa ary karazana hafa isafidian'i Canva. Mihatra tsotsotra ny fampiasana teknolojia ary manana interface tsara ho an'ny mpampiasa.
Dingana dingana telo mora
Ny fahafaha manala kilema
Azonao atao ny manamboatra ny lokon'ny hoditra
Ny mety hanesorana ketrona
Endri-javatra lehibe WordSwag:
Azo ampiasaina amin'ny telefaona iOS sy Android
Misy ny motera fanontam-pirinty tafiditra
WordSwag dia rindrambaiko finday izay tsara hamoronana endrika sary mahaliana. Amin'ny fampiasana azy dia azonao atao ny manova ny atiny voasoratra ho sary namboarina tsara satria a fampiharana fampiharana sary.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny WordSwag, ianao dia ho afaka mamorona sary HD azonao ampiasaina amin'ny fanontana. Azonao atao koa ny manampy sary famantarana namboarina sy mizara ny valiny amin'ny tambajotra sosialy isan-karazany, toy ny Instagram, Facebook, Twitter, ary Tumblr.
Ny mpamorona dia miara-miasa tsy tapaka amin'ireo mpamorona sary matihanina, mamorona endritsoratra stolojika azonao ampiasaina amin'ny lahatsoratrao, ary manampy endrika vaovao. Azonao atao ny mampihatra ny iray amin'ireo endrika endri-tsarimihetsika 27 an'ny Canva hisolo ny sarinao ary mamorona endrika mahavariana.
Solony canva ambony